दुई हारपछि के छ नेपालको सम्भावना?
नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन २०, २०७६, १५:००
काठमाडौं- विजेता बन्ने सपना लिएर थाइल्यान्ड पुगेको नेपाली क्रिकेट टिम दुई खेल लगातार हारेपछि बाँकी चार टिमको नतिजा हेर्दै बस्न बाध्य भएको छ। एसिसी टी-२० पूर्वी क्षेत्रीय छनोट प्रतियोगितामा मलेसिया र हङकङसँग हारेपछि नेपाल एसिया कप छनोटमा पुग्न अन्य टिमको नतिजामा निर्भर हुनु परेको छ।
नेपालको खुबीभन्दा तल्लो स्तरको प्रतियोगितामा नै कमजोर प्रदर्शन गरेको नेपाली क्रिकेट टिमले आफूभन्दा बलियो र उपल्लो स्तरको राष्ट्रसँग कस्तो प्रदर्शन गर्ला? च्याम्पियन बन्दै स्वदेश फर्किने बाचा राखेको नेपाली टिममाथि दुई खेलमा गरेको प्रदर्शनले थुप्रै प्रश्नहरु जन्माएको छ।
खेलमा हार जित स्वभाविक हो। तर आफूभन्दा कमजोर देखिएको मलेसियासँग पहिलो खेलमा २२ रन र दोस्रो खेलमा हङकङसँग ४३ रनको हारले ‘ड्रिम टु एसिया कप’ कमजोर बनेको हो।
दुई खेल हार्दैमा एसिया कपको छनोट खेल्ने नेपालको बाटो बन्द भइसकेको भने छैन। सिंगापुरको हार र हङकङ जित अहिले नेपालका लागि विशेष महत्व राख्छ। कसरी पुग्छ त नेपाल एसिया कपको छनोटमा?
अहिले दुई खेलबाट सतप्रतिशत जित निकालेको सिंगापुर ४ अंक बनाउँदै शीर्ष स्थानमा छ। उसले पहिलो खेलमा थाल्यान्डलाई ४३ र दोस्रो खेलमा मलेसियालाई १ सय २८ रनले पराजित गर्न सफल भयो।
मलेसियालाई फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै सिंगापुरले ४.२७५ नेट रनरेट बनायो। यो सिंगापुरको लागि छनोट हुने बलियो आधार हुन सक्छ।
तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको हङकङको पनि एसिया कप छनोटमा पुग्ने बलियो सम्भावना छ। मंगलबार भएको खेलमा थाइल्यान्डलाई आठ विकेटले पराजित गर्दै हङकङले आफ्नो लय समातेको छ।
तीन खेल खेलेको मलेसिया पनि छनोट नजिक छ। मलेसियाले पहिलो खेलमा नेपाललाई २२ र दोस्रो खेलमा थाइल्यान्डलाई ८ विकेटले पराजित गरेको थियो। २ खेल खेलेको नेपाल अंकविहीन हुँदा आयोजक थाइल्यान्ड भने लगातार तीन खेलमा हार ब्यहोर्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ।
सिंगापुर, मलेसिया र हङकङको चार-चार अंक छ। अब नेपाल भर्सेस थाइल्याण्ड, सिंगापुर भर्सेस हङकङ, नेपाल भर्सेस सिंगापुर र हङकङ भर्सेस मलेसिया गरी चार खेल बाँकी छन्।
अंक तालिका हेर्दा शीर्ष दुईमा पर्न नेपालले अब थाइल्यान्ड र सिंगापुरलाई पराजित गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो पनि फराकिलो अन्तरमा। त्यतिले मात्रै शीर्ष दुईमा नेपाल पर्ने भन्ने होइन। नेपाल शीर्ष दुईमा पर्न हङकङले सिंगापुर र मलेसियालाई हराउनु पर्ने हुन्छ।
नेपालले लगातार दुई खेल जितेमा र हङकङले पनि सिंगापुर र मलेसियालाई पराजित गर्दैमा नेपाल छनोट भइहाल्छ भन्ने पनि होइन। यस्तो हुँदा हङकङले सबै खेलमा जित हात पार्दै चार खेलबाट ८ अंक हुनेछ। यता, नेपाल, मलेसिया र सिंगापुरको समान ४-४ अंक हुनेछ।
अब कुरा आयो नेट रनरेटको। नेट रन रेट जसको राम्रो हुनेछ त्यो टिम नै उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुग्नेछ। नेट रनरेटमा सबैभन्दा बलियो देखिएको छ, सिंगापुर। उसको ४.२७५ रहँदा मलेसियाको -०८२८ छ। यता, नेपालको -१.६२५ छ।
यस्तो पस्थितिमा रहेको नेपालले बाँकी दुई खेलमा ब्यापक सुधार गर्दै थाइल्यान्ड र सिंगापुरलाई फराकिलो जित निकाल्नु पर्छ। र अन्तिम खेलमा मलेसिया र हङकङको के होला भनेर पर्खिनुपर्छ। नेपाल यस्तो कठिन समीकरणमा हुनाले धेरै आश गर्न भने गाह्रो छ।